Fitsipika DEA Hemp vaovao (IFR) - WHIPE & Delat-8 THC avy any Hemp amin'ny Laharana.
Fitsipika DEA Hemp
Resaka Hemp amin'i Tom
Fitsipika farany farany amin'ny DEA Hemp amin'ny volavolan-dalàna momba ny fambolena 2018
Tamin'ny 20 Aogositra 2020, namoaka ny lalàna farany momba ny fampiharana ny lalàna Hemp vaovao amin'ny volavolan-dalàna momba ny fambolena 2018 ny Sampan-draharahan'ny fampiharana ny zava-mahadomelina (DEA). Ny Interim Final Rule (IFR) vaovao dia toa manidy ny fitrandrahana CBD Hemp, na vokatra Delta-8 THC noforonina tamin'ny CBD Hemp ara-dalàna teo aloha. Ny fampiharana ireo lalàna ireo dia mety hitarika fisamborana ireo mpamboly hemp ara-dalàna teo aloha izay nataon'ny agents DEA.
PDF New DEA Final Rule PDF
Ny fitsipika vaovao DEA Interim amin'ny fampiharana ny volavolan-dalàna momba ny fambolena 2018 - izay nanao ara-dalàna ny hemp- dia mety hiafara amin'ny fisamborana sy fitrandrahana marijuana.
Ny fitsipiky ny volavolan-dalàna momba ny lalàna mifehy ny fambolena amin'ny taona 2018, fantatra ihany koa amin'ny «Bill bill Farm», navoakan'ny DEA ny 2018 aogositra 20 dia efa niandrasa ela ary nanantena fa hiteraka fahavoazana tanteraka amin'ny fitomboana sy efa ara-dalàna sahady. orinasa. Tsy gaga izany fa raha ny marina dia nandiso fanantenana ny olona rehetra voakasiky ny indostrian'ny vokatra mifandraika amin'ny otrikaretina satria nametraka ny WIPHE sy tetrahydrocannabinols -or THC- toy ny fandaharam-potoana voafehy 2020 eo ambanin'ny lalàna mifehy ny fanaraha-maso.
Inona no ambaran'ilay fitsipiky ny DEA Hemp?
Ity fitsipika Interim ity dia manova ny famaritana ny fitrandrahana marihuana mba hifanaraka amin'ny famaritana nohavaozina momba ny marihuana sy tetrahydrocannabinols. Ity famaritana nohavaozina izao dia misy ny fetra votoaty 0.3% -THC ho an'ny fitrandrahana, izay midika fa ny fitrandrahana hemp izay misy latsaky ny 0.3% -THC dia namboarina miaraka amin'ilay zavamaniry ihany koa.
Ny dikan'izany dia izao: ny fanodinana hemp dia ho ferana tanteraka satria ny WIPHE dia tsy heverina ho hemp akory, fa marijuana. Manahirana tokoa ny fanatanterahana ny fizotran'ny fitrandrahana vokatra vita amin'ny CBD.
Amin'izay fomba izay, ny DEA dia manameloka ny fampiasana D-8 THC, izay singa voaomana ho synthetika nalaina avy amin'ny ozitano, ary mihevitra azy io ho fandaharam-potoana 1 mifehy fifehezana, noho izany dia mety hahafahan'ny DEA manenjika olona izay mivarotra na namokatra D8 THC ihany.
Inona ny atao hoe WIPHE?
WIPHE dia mijoro ho an'ny Work in Progress Hemp Extract, ary nalaina avy amin'ny hemp tamina fanjakana voahodina ampahany, tsy natao hanjifa. Ny tena olana amin'ny tsy fanarahan-dalàna ity zava-mahadomelina ity dia ny WIPHE dia singa ilaina amin'ny famokarana vokatra CBD sy hemp, izay mbola ara-dalàna amin'ny famokarana sy ny fanjifana, midika izany fa mandray ny indostrian'ny lalàna ny DEA ary mahatonga azy io tsy ho vita araka ny lalàna. manamboatra ny vokariny.
Ity no ametrahana ny Fitsipika Interim Farany izay toa ilazana ny WIPHE:
“Ankoatr'izay, ny famaritana ny hemp dia tsy manala avy hatrany ny vokatra avy amin'ny zavamaniry hemp, na inona na inona votoatiny 9-THC. Mba hahatrarana ny famaritana ny "hemp", ary noho izany dia mendrika ny fandroahana amin'ny fandaharam-potoana I, ny derivatif dia tsy tokony hihoatra ny fetra 0.3% 9-THC. Ny famaritana ny hoe "marihuana" dia manohy milaza fa "ny faritra rehetra amin'ny zavamaniry Cannabis sativa L.," ary "ny sisan-javatra rehetra, ny famokarana, ny sira, ny derivaly, ny fifangaroana na ny fanomanana an'io zavamaniry io." ny famaritana ny "hemp" (amin'ny fidirany ambanin'ny 0.3% 9-THC voafetra amin'ny fototry ny lanja maina) na avy amin'ny ampahany amin'ny zavamaniry (toy ny mason-javamaniry matanjaka na voa tsy mitsimoka). Jereo ny 21 USC 802 (16) (nampiana fanamafisana). Vokatr'izany dia azo avy amnandanja iray na maka vokatra na vokatra mihoatra ny 0.3% 9-THC fetra dia fandaharam-potoana nifehy ahy, na dia 0.3% na latsaka aza ny zava-maniry novolavolany 9-THC amin'ny lanja maina. ”
Na dia WIPHE dia fitrandrahana ny voly hemp ary ampiasaina manokana amin'ny fanamboarana ambanin'ny vokatra miorim-pototra 0.3% D9 -THC, fa tsy ny fanjifana, satria mihoatra ny fetra 0.3% satria ny singa dia heverina ho fandaharam-potoana 1 ary tsy afaka nampiasaina, na dia ny zavamaniry izay nalaina dia ambanin'ny fetra THC.
Inona ny atao hoe Delta-8 THC
Delta-8 THC dia cannabinoid vaovao vao hita avy amin'ny hemp izay nanjary be mpitia eo amin'ny mpanjifa, indrindra noho ny vokariny ara-tsaina, na dia tsy psychoactive toy ny Delta-9 aza. Noheverina ho ara-dalàna satria avy amin'ny hemp ara-dalàna ihany koa.
Ity no nametraka ny Fitsipika Interim Farany izay toa ilazana ny delta-8 THC:
"Ny AIA [fanta-daza indrindra amin'ny hoe Farm Farm] dia tsy misy fiantraikany amin'ny fifehezana ny tetrahydrocannabinols azo avy amin'ny synthetically (ho an'ny fika mifehy ny fibaikoana laharana 7370) satria ny famaritana ny lalànan'ny" hemp "dia voafetra amin'ny fitaovana izay nalaina avy amin'ny zavamaniry Cannabis sativa L Ho an'ny tetrahydrocannabinol azo avy synthetika, ny fifantohan'ny 9-THC dia tsy faritana mamaritra raha hoe zavatra voafehy ny akora ao. Ny tetrahydrocannabinol rehetra avy amin'ny synthetically dia mijanona ho fandaharam-potoana mifehy ny akora mifehy azy io. ”
Midika izany fa, na dia azo heverina ho ara-dalàna aza ny cannabinoids azo avy amin'ny hemp tsy mihoatra ny 0.3%, dia heverina fa ny THC azo avy amin'ny synthetically dia tsy, sanatria izany fa avy amin'ny hemp ara-dalàna ihany koa.
Inona no azoko atao momba ny fitsipiky ny DEA Hemp?
Koa satria ao anatin'ny vanim-potoana famoahana ho an'ny daholobe ireo fitsipika ireo, dia manana 60 andro ianao hanehoana hevitra amin'ity tahirin-kevitra ity. Tsotra ny fizotrany ary afaka, manantena fa tsy hampihatra ity fitsipika ity:
Tokony handeha amin'ny https://www.regulations.gov
Fenoy ireo takelaka, araho ny torolàlana momba ny fomba hanehoanao hevitra
Hamarino tsara, rehefa mameno ireo endrika, hanondroana ny RIN 1117 AB53 / DOCKET No. DEA-500
Raha ao amin'ny indostrian'ny vokatra cannabis ianao dia mety tezitra ary te hanompa ny DEA amin'ny asa mahakivy atao rehefa manazava ny lalàna federaly, fa alaivo fotoana fohy handrafetana ny tenanao ary hifantohany amin'ny fanamarihanao momba ny fiantraikan'ny Fitsipika Farany farany ity amin'ny lalànao raharaham-barotra.
Inona ny fitsipika farany amin'ny DEA Interim
Araka ny voalaza ao amin'ny lahatsoratra ofisialy ny fitsipika farany amin'ny DEA Interim:
"Ny DEA dia adidy hamoaka ity didim-pitsarana farany ifotony ity mba hanavaozana ny fitsipiny, ka mifanaraka amin'ny fepetra nomen'ny CSA izay nasiam-panovana. Tamin'ny famoahana ity fitsipika farany ifanarahana ity dia tsy mihoatra ny lahatsoratra nasion'ny Kongresy ny DEA. Noho izany, ny DEA dia mila hamoaka ity didim-pitsarana farany ifanarahana ity, na inona na inona vokatry ny fandalinana ny lalàna momba ny masoivoho ”
Izahay dia tsy te-hilaza fa miaraka amin'ity Fitsipika Farany Manelanelana ity ary ny fandikana natao dia mitady antony maro hafa ny DEA hisamborana olona amin'ny zavatra mety hitovy amin'ny zavamaniry rongony, saingy toa izany tokoa.
Raha manahy momba ny fiantraikan'ny fanapahan-kevitra DEA ity ianao dia aza misalasala mifandray aminay.